September 15, 2020 2 min read By wardeeq news Reporter
Dabka ka holcaya Xeebta Galbeed ee Mareykanka ayaa bartamaha ka galay ololaha doorashada Mareykanka Isniintii, iyadoo Madaxweyne Donald Trump uu booqday Kaliforniya wuxuuna dabka dusha ka saaray maamul xumada keymaha halka ninka la tartamaya ee Joe Biden uu carabka ku adkeeyay doorka isbedelka cimilada.
Madaxweynaha Jamhuuriga, oo doonaya in dib loo doorto Nofeembar 3, ayaa abaalmarin sharafeed milatari oo loo yaqaan ‘Distinguished Flying Cross’ siiyay toddobo ilaaliyeyaal qaran oo Kaalifoorniya kuwaas oo ku dhiirraday ololka dabka si ay uga badbaadiyaan boqolaal dadka deegaanka ah xaafadaha gubanaya.
Dimuqraadiyiintu waxay ku qarxiyeen Trump inuu inta badan ka aamusay dabkii ugu weynaa ee soo mara taariikhda gobolka.
Biden wuxuu Trump ugu yeeray “dab qabadsiiyaha cimilada” waxayna ka digtay in dib loo doorto madaxweyne diida inuu wax ka qabto isbedelka cimilada.
“Haddii aan haysanno afar sano oo dheeri ah diidmada cimilada Trump, meeqo xaafadood ayaa ku gubi doona dabka duurku? Meeqa xaafadood oo ka mid ah hareeraha magaalada ayaa daadadku qaadi doonaan?” Biden ayaa weydiiyay.
Joe Biden wuxuu ka hadlayaa dabka cimilada
Musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden wuxuu ka hadlayaa isbedelka cimilada intii lagu guda jiray ololihii ololaha oo lagu qabtay Matxafka Delaware ee Taariikhda Dabiiciga ee u dhow gurigiisa oo ku yaal Wilmington, Delaware [Leah Millis / Reuters]
Biden, oo ay dhaleeceeyeen Jamhuuriyiinta inuusan booqan meelaha musiibada ka dhacday, wuxuu ka hadlay gobolka uu ka soo jeedo ee Delaware isaga oo ka hadlaya qatarta cimilada daran ee saynisyahanada cimilada ay ku sheegeen inay dabka sii shidayso.
Madaxweynaha iyo maamulkiisa waxay isku dayeen inay eeda dusha ka saaraan dababka waaweyn ee ka kacay mas’uuliyiinta gobolka, iyagoo sheegay in keymaha shidaalka ku xaniban loo baahan yahay in la khafiifiyo, dab-damisyada waa in la gooyaa, iyo caleemaha dhintay ee ololi kara oo laga sifeeyay sagxadaha keymaha.
“Waxaan u maleynayaa in tani ay ka badan tahay xaalad maarayn,” ayuu yiri Trump, markii uu weydiiyay weriye haddii isbeddelka cimilada ay tahay sababaha ka dambeeya dabka, isagoo ku andacoonaya in dalal badan oo kale aysan la kulmin dhibaato la mid ah.
Dhibaatooyin sidan oo kale ah kuma haystaan. Waxay leeyihiin geedo aad u qarxa, laakiin dhib kuma qabaan dhibaatooyinka sidan oo kale ah.